အရောင်ချယ်သောလူမီနီယမ်ကွိုင် | YK လူမီနီယမ်
Color-coated aluminium coil သည် aluminium coil သို့မဟုတ် aluminium plate အပေါ်ယံလွှာနှင့်အရောင်ခြယ်ပြီးနောက်ထုတ်ကုန်ကိုရည်ညွှန်းသည်.
အရောင်ခြယ်ထားသောလူမီနီယံကွိုင်များ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမျက်နှာပြင်နှင့်အရည်အသွေးသည်များစွာသောနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသူ၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည်, လျှောက်လွှာကိုအထူးအာရုံစိုက်သင့်သည်. So, အရောင်ခြယ်ထားသောလူမီနီယံကွိုင်ကိုအသုံးပြုသောအခါမည်သည့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သင့်သနည်း?
ပထမဦးဆုံး, ဒါကြောင့်အသုံးပြုမှုသို့ထားခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ပုံမှန်အပူချိန်ရှိရမည်, နှင့်အပူချိန်အရမ်းပူသို့မဟုတ်လည်းအအေးမဖြစ်သင့်သည်. ဒါကြောင့်ခေါင်မိုးလျှင်, အမြင့်ထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်ပါ 10 ဒီဂရီ.
ဒုတိယအကြိမ်, တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ, အမိုးမိုးပစ္စည်းများကိုမဝတ်ဆင်ရန်သေချာစေရန်အချိန်ကိုစစ်ဆေးပါ, ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်, နှင့်ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသေချာစေရန်.
စတုတ်ထ, အရောင် - အလူမီနီယံကွိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အထက်ဖြစ်သင့်သည်7℃, အပြောင်းအလဲနဲ့ roller စနစ်၏ကွာဟမှုကိုအရောင် -coated လူမီနီယံကွိုင်၏အထူသည်နှင့်အညီချိန်ညှိရပါမည်, နှင့်ကြိတ်စက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနိုင်ငံခြားအရာဝတ္ထုနှင့် pallet ဖယ်ရှားပစ်ရပါမည်; မျက်နှာပြင်ကိုချွတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊, ကချွတ်လျှင်, အကြောင်းပြချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးမှသာဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်.
အရောင်ခြယ်ထားသောလူမီနီယံကွိုင်များ၏တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်, အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော installation အတွက်တိကျစွာလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်.
အရောင်ခြယ်ထားသောလူမီနီယံကွိုင်ထုတ်ကုန်များ၏ရင့်ကျက်သောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူ, အရောင်လူမီနီယံကွိုင် (boards) မြင့်မားသောအဆောက်အ ဦး များတွင်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအလူမီနီယံပစ္စည်းများဖုံးအုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်. ဒါဟာအများပြည်သူနေရာများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်အလှဆင်အတွက်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအလှဆင်အတွက်လည်းအဖြစ်များသည်. အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလူမီနီယံကွိုင်များသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းအလှဆင်မှုများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်, စီးပွားဖြစ်ကွင်းဆက်၏အလှဆင်ခြင်းနှင့် display ကို, ပြပွဲကြော်ငြာ, စသည်တို့, နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များ၏တညီတညွတ်တည်းမျက်နှာသာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ.
၎င်း၏ function ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးဆောင်အပြင်, ဝယ်ယူသောအခါငါတို့ဂရုတစိုက်၎င်း၏အသွင်အပြင်စစ်ဆေးရပေမည်.
အရည်အချင်းပြည့်မီသောအရည်အသွေးရှိသောအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလူမီနီယံကွိုင်များသည်သိသာထင်ရှားသည့်စာချုပ်မရှိရပေ, ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပေါ်ယံပိုင်း, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အပေါ်ယံပိုင်းပျက်စီးမှုကိုထိုးဖောက်, နှင့်ဂယက်ထ, ခြစ်ရာ, နှင့်အရည်ကြည်ဖုခွင့်မပြုပါ. ဤရွေ့ကားကြည့်ရှုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်, အရေးအပါဆုံးကတော့အရောင်ကွဲပြားခြားနားသောအလူမီနီယမ်ကွိုင်၏အရောင်ကွာခြားမှုကိုသင်ဂရုပြုသင့်သည်. သငျသညျပွုပါလျှင်အာရုံစူးစိုက်မှုမပေး, ဒါကိုမြင်ဖို့မလွယ်ဘူး, သို့သော်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုသောအခါနောက်ဆုံးအလှဆင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ရောက်လိမ့်မည်.
လက်ရှိကုလားကာနံရံအလူမီနီယံပန်းကန်ကိုလည်း electrostatic ပက်ဖြန်းခြင်းဖြင့်ကုသပါလိမ့်မည်. အမှုန့်မှုတ်လိမ်းပစ္စည်းအဓိကအားဖြင့် polyester ဖြစ်ပါတယ်, တိုးချဲ့ဗဓေလသစ်, epoxy ဗဓေလသစ်နှင့်အရောင်များမြင့်မားသော retention ကိုဆိုးဆေးနှင့်အတူအခြားပစ္စည်းများ, အမှုန့်ပက်ဖြန်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားသောအရောင်များကိုရနိုင်သည်. အဆိုပါအလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းအလွန်ကောင်းလှ၏.
လူမီနီယမ်စာရွက် / ပန်းကန်
ဥရောပရှိ ရောင်စုံ အလူမီနီယမ် ကွိုင်/ကြိုတင် ဆေးသုတ်ထားသော အလူမီနီယမ် ကွိုင်
လူမီနီယမ်စာရွက် / လူမီနီယမ်ပြား
အရောင်ဖြင့် အုပ်ထားသော အလူမီနီယမ် ကွိုင်/ ပြင်ဆင်ထားသော အလူမီနီယမ် ကွိုင်
ကြေးမုံ Finish / Reflective Aluminium စာရွက်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးလူမီနီယံသတ္တုပါး / Alu သတ္တုပါးထုပ်ပိုး
လူမီနီယမ်စက်ဝိုင်း / discs တွေကို
ဖောင်း / Stucco လူမီနီယံသတ္တုပါး